SomaliaReport: Loolanka iyo Dhibaatooyinka Saxaafada Soomaliya
By ROBERT YOUNG PELTON 03/27/2012
March 23-keedii, waxaan daabacnay war ku saabsan gabar Soomaaliyeed, Shukri Cabdi oo sheegatay inay ku nooshahay Beled Xaawo oo dhawaan codsi usoo qoratay inay suxufi ka noqoto Somalia Report. Warkii saddexaad ee ay noo soo gudbisay ayaa umuuqday mid xiiso leh maadaama ay wareysatey haweyney sirdoonka al-Shabaab ah. Tii ugu danbeysey waxaa la filayey inay wareysato Ra’iisul Wasaaraha Soomaaliya, taasina waxay aheyd fursad caadiga ka baxsaneyn maadaaama DKMG ay isdhexgalaan saxaafada.
Waan soo dhaweynaa wararka aan la codsan ee ka yimaada suxufiyiinta. Isku dubaridayaashayada ama tafatirayaalkayaga ayaa ayaa xusha wararka tayada leh una qoondeeya in suxufiyiin qora. Arrintan, waxay noo sheegtay inay fursad uheshay wareysiga ra’iisul wasaaraha waana ku hanweyneyn inaan suxufi dumar ah fursad weyn siino. Waxaan amar ku siiyey shaqaalahayaga iney suxufiyiinta kusoo daraan dumar Soomalaiyeed oo kala duwan, maadaama liiskayaga ay ku jiraan 110 suxufi oo ku sugan Soomaaliya oo dhan badankoodna yihiin rag.
Wareysigeedii wuxuu noqday mid ah ficil khaa’inimo oo ay warkeedii hore ku wareysatey haweeney sirdoonka al-Shabaab ah laakiinse aheyd sheeko nololeedkeedii. Ma aheyn dhacdo isku soo toostay, laakiinse ururka argagixisada ah iyo ilaha warfaahinta ayaa markiiba falkan uga faa’iideystay daacaayad iyo daciifnimo.
Anigu waxaan u arkaa awood. Waxaan u bareerney halis maadaama aan fursadna siiney haweyney Soomaaliyeed oo umuuqatay iney ku nooshahay magaalo fog si ay degaankeeda usahamiso oo ay su’aalo weydiiso siyaasi qaran. Awoodayadu waa waa ubareerka inaan fursad siino shakhsiyaad cusub oo aan horey loo tijaabin.
Maadaama ay been usheegtey dunida, been abuurtadani waxay meel uga dhacday qoyskeeda iyo bulshadeeda. Khaladkayagu mooraal ma aheyn daabacaada wareysigeedii ee wuxuu yahay aaminka aan aaminey iyada.
Isku dubaridahayaga, Jay Bahadur ayaa markiiba wareysigii ka saaray oo daabacey raalli gelin. Isku soo dubaridayaashayada ayaa isla markiiba lagu wargeliyey inay ka digtoonaadaan falkan oo kale, anaguna si cad oo xaqiiq ah ayaan khaladkayaga ubaahiney.
Layaab ma leh kooxaha ku dabaaldegaya been abuurka waayo waxay yihiin afhayeenada dacaayada al-Shabaab. Laakiinse waxay luminayaan waqtigooda. Waan daabacnay falalka, falxumada iyo fikradaha kooxahan iyo kooxkasta oo Soomaali ah anagoo u ogolaanay dhibqabayaashooda, hogaamiyayaalkooda iyo xubnahooda caadiga ah in lasoo bandhigo iyadoon la cunaqabateyn. Suxufiyiintayaduna sidoo kale ayey fursad usiiyaan kooxaha oo dhan iyagoon cidna gees ku riixin.
Isla waqtigaas, wariyayaasha Soomaaliyeed waxay ku howlan yihiin raadinta iyo qorida warar ku saabsan xaalado kala duwan oo ka mid yihiin dibaatada barakacayaasha, duqeynta diyaaradaha, soo koobida wararka, dagaaladii ugu danbeeyey, iyo wareysiga gaarka ah ee Sheekh Rooboow. Wararkan oo dhami waxay ahaayeen xaqiiq iyagoon faaladu dhinacna ujanjeerin oo loo soo abaabuley inay codadka Soomaaliyeed dunida ku baahiyaan.
Ka tuurista wareysigan shabakadayadan, dabacaada raalli gelinta iyo baahinta khaladka waxay ubadan tahay markii ugu horeysey saxaafada gobolka eek u wajahan Soomaaliyeed. Muuqaalka guud ee saxaafad daacad ah laakiinse badanaaba dhan u janjeerta, Somalia Report waxay ku dadaashaa inay macquulnimo iyo bayaannimo kusoo biiriso xaaladan murugsan. Fahankayagan iyo soo bandhigida khaladkayagu wuxuu xoojinayaa qoraayaalkaga kale iyo wararka.
Waxaan ku abuurey mashruucan inaan sii wado war kasoo gudbinta goobaha colaadeed ee dunida. Waxaan ku bilaabey buugaagteyda, taxanaha televishinka, qoraalada joornaalada iyo shabakada 24/7 si aan awood usiiyo dadka degaanku inay fikradahooda isdhaafsadaan una wargeliyaan dadkooda.
Waxaan ku tala jirnaa inaan qiimeyno ama sicir u yeelno mashruucan (rukun joornaalka), warbixinta iyo iftiiminta gobolka. Wax siyaasad, gobol iyo qabiil ujanjeer ah naguma jiraan. Laakiin hadafku wuxuu yahay in lacagtaa la gaarsiiyo sufuxiyiinta Soomaaliyeed ee gudaha jooga. Waxaa huban in khalad dhacayo maadaama aan ka wartebino gobol aad u kacsan oo aan rabno inaan si deg deg ah wararka usoo gudbino isla markaana la shaqeyneyno dhallinyaro yar yar. Inkastoo aan la shaqeyno dhallinyaro tayo leh oo gudaha ku sugan, waa howl aad ugu culus shaqaalahayaga kooban ee Soomaalida iyo reer Galbeedka isugu jira inay qandaraasyo bixiyaan, codsiyada akhriyaan, ayna xushaan wararka xiisaha leh. Marka wararku nasoo gaaraana aan saxno, hubino xaqiiqda, daabacno isla markaana cusbooneysiino. Goobtan aan dooranay ee ubaahan shaqeyn afar iyo laabaatan saacadood ma aha meel ku haboon tacbaanka ama cagajiidka.
Sidii aan ubilowney hawlgalkan 15 bilood ka hor, Somalia Report waxay daabacdey in kor udhaaftay 4,000 warar, warbixino, falanqeyn, dokimentiyo, qariirado, iyo sawiro. Intaas oon dhanna hadafku ahaa inaan dadka Soomaaliyeed gaarsiino arrimaha gobolka. Waa suurta gal inaan khalad sameyno maadaama aan dooraney biimeyntan faahfaahsan ee halista iyo kacdoonka leh.
Waa dhaqankayaga inaan sida ugu dhaqasaha badan udaabacno una qaadano khaladka anagoo sii wadeyna raadinka xaqiiqda, tababarida iyo taagerida suxufiyiinta iyo shaqadooda.
Saxaafada Soomaaliyeed waa camalka ugu adag ee dunidan. Ka guuleysiga hanjabaad joogta ah oo ka imaneysa gacan ku dhiiglayaal ku gabanaya diinta, raad gadka dacaayad abuurka militariga iyo dowlada, ka gabashada lacag maroojinta, dhaca iyo dilitaanka. Raggan iyo dumarkuba waxay ka guuleysteen dhibaatooyinka teknikada iyo dhaqaalahaba si ay wararka usoo gudbiyaan dunida.
Suxufiyiintayada maalin kasta ayaa loo hanjabaa oo dhibaatooyin soo foodsaraan si ay wararka usoo tebiyaan. Waxaan uhayaa xushmad waana sii wadeynaa inaan halis ubareeno si aan usoo bandhigno suxufiyiin cusub and codadkoodaba.
Markasta waan soo dhaweynayaa fikradihiina iyo talooyinkiinaba publisher@somaliareport.com